Kooxda AC Milan oo xaqiijisay inay Wadahadallo kula jirtay xiddiga Tottenham ee Serge Aurier… (Halkee ayay hadda mareysaa arrintaas?) – Gool FM
(Milano) 05 Agoosto 2020. Madaxa AC Milan ee Paolo Maldini ayaa xaqiijiyey in Kooxdu ay wadahadallo ay ku doonaysay inay kula saxiixato kula jirtay ciyaaryaanka naadiga Tottenham ee Serge Aurier.
Difaacan garabka midig ee 27-sano jirka ah ayaa Spurs kaga soo biiray Kooxda reer France ee Paris Saint-Germain sanadkii 2017-kii, waxaana haatan qandaraaskiisa kooxda reer England uga harsan labo sanadood.
Agaasimaha farsamada AC Milan ee Paolo Maldini ayaa Sabtidii xaqiijiyay in kooxdu ay wadahadallo la yeelatay wakiilka Aurier sanadkii hore.
Ka hor markii Rossoneri ay xilli ciyaareedka ku soo dhammaysatay guul 3-0 oo ay ka gaartay Cagliari, isla markaana ay ku gashay kaalinta lixaad, waxa uu Maldini yiri: “Waan la hadalnay wakiilkiisa sanadkii hore.
“Waxaan ka fikirnaa inaan si fiican ku dhameysanno xilli ciyaareedka, marka saddexdaas toddobaad waa inaan suuqa ka hawlgalnaa.”
Dhinaca kale Suxufiga isboortiga ee reer Talyaani, Fabrizio Romano ayaa warinaya in daafacan garabka midig ee Aurier uu weli yahay bartilmaameedka AC Milan ee xagaagan.